FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA FOXHOUND ANGLISY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Foxhound anglisy
Hunter the English Foxhound amin'ny 2 taona— 'Noraisinay i Hunter tamin'ny Andron'ny Adala tamin'ny Aprily 2006. 2 taona izy. Alika tsara hananany. Rehefa mihantitra ireo ankizy dia tsy dia nanao fanatanjahan-tena be toy ny taloha intsony izy. Izy dia manana fironana hihady sy ho lasa adala ho an'ny squirrels. '
Alika fihazana atleta ny English Foxhound. Mivelatra ny karandohany ary lava ny vava. Sahabo ho 10 santimetatra ny halavan'ny orona ary misy vavorona misokatra malalaka. Ny nify dia tokony hihaona amin'ny kaikitry ny hety. Ampidinina ambany ny sofina mihantona, mandry eo an-doha. Ny sasany misafidy ny 'boribory' ny sofina, izay midika hoe 1 1/2 santimetatra eo ho eo no tapaka ny faran'ny sofina. Ny maso lehibe dia volontany. Mahitsy ny tongotra ary boribory ny tongotra toa ny saka. Atao avo ny rambony lava. Ny palitao dia fohy, mafy, matevina ary marevaka. Ny lokon'ny palitao dia misy loko mainty, mainty sy fotsy, ohatra ny tricolor (mainty, fotsy sy mainty), na bicolor misy fotsy fotsy, na izay mitambatra amin'ireo telo ireo.
Ny English Foxhound dia mpihaza mahery fo. Angovo avo, mila fanatanjahan-tena isan'andro. Izy io dia mamaly tsara ny fitarihana ary vonona sy mahay mankatò, saingy tsy dia mamaly toy ny karazana sasany ary ny fiofanana dia mitaky faharetana sy fahatakarana amin'ny ankapobeny ny momba ny biby kanin. Sariaka amin'ny olona izy ireo ary tsara amin'ny ankizy, saingy aleony miaraka amin'ny alika hafa ary manao tsara amin'ny biby hafa. Ilay Foxhound anglisy dia tia mando. Tsy sasatra izy ireo, afaka mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha maharitra mandritra ny dimy na enina ora tsy mijanona. Mety hanimba nefa tsy misy fanatanjahan-tena. Ny Foxhound dia miadana kely eo amin'ny fito na valo taona eo ho eo. Ny English Foxhound somary stockier ary miadana kokoa noho ny Foxhound Amerikanina , fa manana toetra mitovy amin'izany. Misy karazany roa, tsipika an-tsaha ary tsipika fampisehoana (dabilio). Ny karazan-tsaha dia nompiana ho an'ny asa fihazana sy fitsapana an-tsaha. Ny karazana dabilio dia namboarina ho fampisehoana fampifanarahana. Ireo karazany roa ireo dia mazoto ary mila fanatanjahan-tena isan'andro, fa ny tsipika an-tsaha kosa dia manana haavon'ny angovo avo kokoa ary mila fanatanjahan-tena bebe kokoa aza. Ny haavon'ny fanapahana amin'ity karazany ity dia miovaova na dia ao anatin'ny fako iray ihany aza. Raha tsy ianao ilay karazan'olona afaka maneho rivotra voajanahary milamina, fa fahefana hentitra, dia aza hadino ny misafidy pup izay mora manaiky kokoa. Ny toetran'ny tsipika fampisehoana sy ny tsipika dia samy hafa be, miankina amin'ny fomba itondran'ny tompony ny alika sy ny ohatrinona ary ny inona karazana fanatanjahan-tena manome izy ireo. Ireo karazany roa ireo dia mbola voalohany indrindra a alika mihaza , na dia afaka manao namana tsara aza izy ireo raha omena fanatanjahan-tena ampy. Manoro hevitra anao fa raha mitady hanana biby fiompy anglisy Foxhound fotsiny ianao dia biby jogger mazoto, bisikileta na mpandeha an-tongotra ary mitady mpiara-miasa amina kaninina. Na ny tsipika fampisehoana aza dia mila fanatanjahan-tena betsaka, kely fotsiny, satria ny karazana saha dia mavitrika tokoa. Ity karazana ity dia tsy mila fanatanjahan-tena isan'andro fotsiny, fa koa tompona manana tapa-kevitra, fomba fitiavana tsy tapaka , fametrahana fitsipika SY FIRAFITRA ary mifikitra tsy tapaka amin'izany.
sary an'ny alika kely shih poo
Lanja: 65 - 70 pounds (29 - 32 kg)
Ny Foxhounds anglisy dia tsy tokony hatao amin'ny fiainana an-trano. Mavitrika be izy ireo ao an-trano ary manao tsara indrindra amin'ny velaran-tanety.
Ity karazana ity dia mila fanatanjahan-tena be dia be mba hahasambatra. Mila raisina isan'andro, lava, haingana MANDEHANA na jogging izay ametrahana ny alika handeha eo anilany na ao ambadiky ny olona mitazona ny fitarihana, toy ny ao an-tsain'ny alika, ny mpitarika no mitarika ny lalana ary io mpitarika io dia mila ny olombelona, ​​fa tsy ny alika. Ny fametrahana kitapom-batsy amin'ny alika dia afaka manampy azy handany haingana ny heriny. Mety tsara ny jogging na bisikileta miaraka amin'ny alika mihazakazaka eo akaikinao, satria afaka mandeha mandritra ny ora maro ireo alika ireo nefa tsy reraka. Alika fihazana mavitrika izy ireo izay mety hivoaka aorian'ny fofona mahaliana, noho izany aza esorina ny fofona anglisy Foxhound raha tsy ao amin'ny faritra azo antoka ianao. Foxhound izay tsy ampy fanatanjahan-tena sy / na fanatanjahan-tena ho lasa strung avo sy may mamorona olana manimba sy manimba .
shih tzu pom afangaro alika kely
Ny Foxhound Anglisy dia nanomboka talohan'ny taona 1800, tany Great Britain. Ny Brits dia nitahiry maherin'ny 250 fonosana fihazana amboahaolo hafa, izay nitazomana ny bokin'ny British Masters of Foxhounds Association hatramin'ny farafaharatsiny 1800. Ny firaketana ny Foxhounds anglisy dia niseho tany Etazonia nanomboka tamin'ny tapaky ny taona 1900. Izy ireo dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny fiampitana hounds isan-karazany miaraka amin'ny Bulldog , Greyhound ary ny Fox Terrier . Ampiasaina anaty fonosana hanenjehana amboahaolo miaraka amin'ireo mpihaza mitaingina soavaly, ny Foxhound dia manana tanjaka mahavariana sy orona tsara. Afaka mihazakazaka maharitra mandritra ny ora maro izy. Ny sasany amin'ny talentan'ny English Foxhound dia mihaza, manara-maso, mpiambina ary mailaka. Ny English Foxhound dia neken'ny AKC tamin'ny 1909. Ny English Foxhound dia somary miadana kokoa ary somary ambany noho ny Foxhound Amerikanina .
Afaka. Ch. Brooklea's Jessy Jane, CGC (Can. Am. Ch. Whipperinn Anchor Man ex Can. Ch. Harnett's Brooklea Lace), novolavolain'i Roger Seabrook, fananan'i Jenn Somogyi, sary nahazoana lalana avy tamin'i Foxhunter sy Kiefernfels Kennels
Hunter the English Foxhound amin'ny faha-7 taonany
Rocky telo taona
yorkie coton alika kely amidy
Rocky (ankavanana) miara-dia amin'i Prissy sakaizany Beagle
Lehilahy olon-dehibe Foxhound anglisy anglisy miloko amin'ny 1 taona
sary an'ny alika kely doberman pincher
volo sinoa volom-borona sinoa manapaka volo
sarin'ny mpiandry ondry aostraliana kely